I-V40 nobuchwepheshe bokuvikela | IOL Isolezwe
I-V40 nobuchwepheshe bokuvikela
Isolezwe / 31 May 2012, 08:01am /
UKUBA nama-sensor ayisikhombisa, ubuxhakaxhaka besimanjemanje nonyazi lwe-airbag kwenze iVolvo Car Corporation yaba yinkampani yokuqala emhlabeni ukwenza lobu buciko obusezingeni eliphezulu.
Lezi ngezinye zezinto ezitholakala emotweni entsha yale nkampani i-Volvo V40 equkethe lolu hlobo le-airbag, olwaziwa nge-Pedestrian Airbag Technology.
Izingozi zomgwaqo ezibalelwa ku-25% eChina zimbandakanya abantu abahamba ngezinyawo. Ezwenikazi i-Europe balinganiselwa ku-14% bese kuthi eMelika babengu-12%. Isibalo sabantu abalimalayo sikhulu kunesabafayo. Isibalo esiphezulu sezingozi zomgwaqo okulimala kuzo abantu emakhanda sidalwa yisakhiwo semoto esiqinile esingaphansi kwe-bonnet panel, unqenqema oluphansi le-windscreen nama-A pillars.
Lena ngenye yezinto iVolvo Car Corporation eqale yazibheka ngaphambi kokwakha i-Pedestrian Airbag Technology. Lobu buchwepheshe bubonakale ngesikhathi kwethulwa iVolvo V40 eGeneva ekuqaleni konyaka. Le moto esanda kwethulwa igabe nge-five-door hatchback esesitayeleni, iyi-sport futhi iphethe ubukhazikhazi base-Scandinavia
Ngokusho kukaMnuz Thomas Broberg, i-Senior Technical Advisor Safety kwa-Volvo uthe: “Siyazigqaja ngokuthi sakhe imoto ene-airbag yabantu abahamba ngezinyawo. Inhlosongqangi ngokwakha kwethu le-airbag wukuthi sivikele abahamba ngezinyawo ezehlakalweni ezithile uma bembandakanyeka engozini yemoto ukuthi bangalimli ekhanda.”
Lama-sensor ayisikhombisa afakwe ngaphambili ku-bonnet yale moto enziwe ngendlela yokuthi akwazi ukuthumela ngokushesha umyalezo kwi-control unit.
Ngaphambi kokuthi imoto ishayise noma yini kunezimpawu ezishintsha ngokushesha.
Kungalesi sikhathi-ke lapho ama-airbags avele aphume khona ngokushesha ezwa ukuthi lokhu azokushayisa ngunyawo lomuntu.
IKHUPHULA I-BONNET NGO-10 CENTIMETRES
Ihhuku le-bonnet ngalinye elilekelelwa yi-pyrotechnical release mechanism, livele libhoncule ophini bese lidedela ingemuva le-bonnet ngokushesha. Ngalesi sikhathi, i-airbag esuke isebenza ivele igcwalise ngokushesha umoya. Ngesikhathi sokuyigcwalisa komoya, i-airbag ifukula i-bonnet. Iyikhuphula ngama-centimetre angu-10 ihlale kanjalo kule ndawo.
UBroberg uthi le-airbag inemisebezi emibili emqoka. Umsebenzi wokuqala ngowokuthi ifukule i-bonnet ivule isikhala, owesibili owokuvimba indawo engezansi ku-windscreen ukuze umuntu angalimali uma etholana phezulu nayo.
Uma isigcwele umoya, i-airbag imboza yonke i-windscreen wiper recess. Lokhu kwenza ukuthi angaphazamiseki umshayeli akwazi ukubona lapho eyakhona. Konke lokhu kuthatha amasekhondi ambalwa kwenzeka.
Kusetshenziswe imifanekiso yezinyawo eyakhiwe kuhlolwa le-airbag. Isebenza ngesivinini esiphakathi kuka-20 kuya ku-50km/h ukushesha kwayo. U-75% wezingozi ezimbandakanya abantu abasuke behamba ngezinyawo zithatha u-40km/h.
“Sakhe lobu buchwepheshe sisebenzisa imifanekiso nge-khompyutha nemilenze nekhanda okufana nokomuntu. Sisebenzise izindlela eziningi senza lolu cwaningo olube yimpumelelo,”kusho uBroberg.
Le airbag yakhiwe ngesikhwama esine-gas generator. Kuthatha isikhathi esingaphansi kwe-second ukuthi sigcwale ngesikhathi sengozi.
Akukhona okokuqala abakwaVolvo benza ubuchwepheshe obuvikela abantu abahamba ngezinyawo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-2010 iVolvo Car Corporation yethule obunye ubuchwepheshe obaziwa nge-Pedestrian Detection. Lobu buchwepheshe bukwazi ukunqanda ingozi ingakenzeki ngesivinini esingafinyelela ku-35km/h uma umshayeli wemoto engakwazanga ukuyigwema ngesikhathi.
Lokhu kukwazi ukwehlisa ijubane le moto ngaphambi kokuthi kwenzeke ingozi.
Lena ngenye yezindlela zakwa-Volvo Car Corporation
yokunciphisa isibalo sezingozi zomgwaqo ezidlula nemiphefumulo yabantu abaningi.